Tag: formulazy fanoratana | Martech Zone
Tag: formulazy fanoratana
Inona no atao hoe Copywriting mivantana valiny? Ahoana ny fomba hanoratanao kopia ireo niova fo
Alakamisy, Septambra 6, 2018 Alarobia, Septambra 5, 2018 Douglas Karr
Tsy hanatanteraka tsotra izao ny lahatsoratra antonony. Mbola gaga foana aho rehefa mijery lohahevitra mahaliana amin'ny alàlan'ny fikarohana sy sosialy fa rehefa manomboka mamaky ilay lahatsoratra aho dia mankaleo sy tsy misy fampahalalana fotsiny. Raha manamboatra pejy fidinana roa miaraka amina tolotra mitovy tanteraka ianao, dia manome toky aho fa ny iray izay nosoratan'ny mpanoratra mpanoratra manan-talenta dia hahazo fifantohana bebe kokoa. Amin'ny lafiny hafa, mbola maniry ny ho mpanoratra mahay aho.